बेला न कुबेला भोट ‘नेउला’ « AayoMail
भक्तपुरको मिश्रित समाजमा हुर्किरहँदा सानैदेखि सुनेर खुब घत परेको श्रुति छ– ‘बेला न कुबेला बजी नेउला।’ अर्थात्, जुन बेला पनि चिउरा खाने। नेवारी भाषामा बजी नेउला भनेको चिउरा खानु हो। अहिले केपी ओली फलामको चिउरा खाँदैछन्, संसदमा विश्वास मतको। त्यो पनि बेला न कुबेला।
देशमा कोरोना भाइरसले डंका पिटिरहेको छ, केपी ओलीले नै ठाडो आदेश दिए पनि अक्सिजन–आइसियु–रेमिडिसिभर पाउने-नपाउने ठेगान छैन। त्यसैले उनले नेपाल टेलिकमको ब्याकअप रिङटोनबाटै गीतात्मक आदेश दिँदै भनेका छन्– अर्को जुनीको ठेगान छैन, यो जुनीमा कोरोनाबाट बचाउन हामी केही गर्न सकिन्न, घरै बस।
अब प्रश्न छ– जनता घरै थुनिँदा ओलीलाई संसदमा किन भीड उराल्न परेको, कोरानाले शिथिल सभासद र मन्त्रीसमेत आउनुपर्ने गरी?
अनि यो सबै कतिबेला? त्यतिखेर जब प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीकै मिलेमतोमा खोप कमिसन प्रकरण भएको बाहिर आएको छ। यसबाट आफ्नै चरित्र उदांगियो भनेर दुःखी हुँदै भाषणको सुरुमै आफूलाई हिलो छ्यापिएकाे गुनासो चाहिँ किन गर्नुपर्‍याे?
खासमा प्रधानमन्त्रीले छम्कने अत्तरभन्दा हिलो धेरै पवित्र छ। अब हिलोमै धान रोप्ने बेला आउँदैछ। तर, हिलो खेल्दै रोपाइँ गर्न किसानले पाउने हुन् या हाेइनन्, ठेगान छैन। ओली र उनका विश्वासपात्रले कमिसनमा र्‍याल नकाढेका भए किसानले पनि खोप लाउन पाउँथे होलान्। निर्धक्क हिलो खेल्न पाउँथे होलान्, मुठी छरेर मानो फलाउँथे होलान्। कोरोना सकिएपछि पनि त घयाम्पामा गेडो चाहियो नि। त्यो पनि नभए ओली सरकारले दिने केही होइन।
ओली चुनाव गराउन चाहन्छन्, आफ्नै हातले। चुनावै भनेर सत्ता लम्ब्याउनेवाला छन्। उनी त अम्बाको पात खाएर कोरोनाबाट बाँच्छन होला, तर जनता कोरोनाबाट जति मरे त्यति नै चुनावको मिति सार्दै सत्ता लम्ब्याउन सजिलो हुने बुझाइ हुन के बेर?
ओलीलाई पाँच वर्ष ढुक्क शासन चलाएर अर्को चुनाव गराउनु भनेर जनताले मत दिएकै हुन नि। तर, जनताले बनाएको संसदलाई उनले नै घाँटी निमोेठेका होइनन र? अहिले त्यही संसदमा उनी आदर्श फ्याँक्दैछन्। हेरि राखौं, उनले केही दिन, सातामै संसद विघटन गर्ने खेलो झिक्छन्–झिक्छन्।
कथित राष्ट्रवादी नाराबाट जनमतको लहर सोझ्याएका ओली, पर्दा जे पनि गर्ने कुटिल र नैतिकताहीन नेता हुन् भन्ने तथ्य पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्रचुररूपमै प्रमाणित भएको छ। उनी र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सहकार्यबाट अब पनि संवैधानिक मूल्य र मर्यादामाथि खेलबाड हुने ठाउँहरू निकै छन्। ठाउँ पाएसम्म खेल्ने दुवैको राजनीतिक चरित्र हो।
भण्डारी राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थामा पुगेर पनि गुटको शक्ति सञ्चिति र बाँडफाँट गर्ने भण्डारेभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुग्न सकेकी छैनन्। यसले गर्दा लोकतन्त्रमाथि नै चौतर्फी संकट छ। र, यसको हिसाबकिताब चाहिँ नेपाली जनताको सामर्थ्यभन्दा बाहिर लाने प्रयास यथेष्ठ भइरहेका छन्। ओलीको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षा र कुण्ठामा खेलेर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाह्ने बाह्य शक्ति यतिबेला अतिशय हाबी हुनु यसकै एउटा दसी हो। जसका लक्षणहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्णयमा देखिने गरी झल्किरहेका छन्, ओलीका कदमहरूमा अदृश्य ढंगले चम्किरहेका छन्।
ओली कुनै हालतमा सत्ताबाट दायँबायाँ हुन सक्दैनन्, चाहन्नन्। उनलाई जनता भकाभक मरिरहेको दृश्यले छुन्न। हाकाहाकी विदेशी मिडियामार्फत् संसारलाई भन्नसक्छन्– हामीकहाँ कोरोना नियन्त्रणमा छ। यति भन्न सक्नेले जे पनि गर्छ, जोसँग पनि झुक्छ, जसलाई पनि सिध्याउन सक्छ। यस्तो मनोदशाको शासकले एउटा निश्चित समयसम्म जनतालाई अकल्पनीय प्रलयमा पारिरहनसक्छ।
ओली यस्तै हुन्, हामी चाहिँ घरै बसौं। कोरानाबाट बचेमात्र ओलीराज पतन भएको हेर्न पाइन्छ।
कोभिड-१९ खोपमा सरकारको फितलो नीति
खरिद गरिएका खोप होस् या अनुदानमा प्राप्त खोप, सबैको ल्याब टेस्टसहित प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा खोपले निम्त्याउने अवान्छित घटनाबाट
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जसरी संघीयता ल्याइएको छ, त्यसलाई सुधार गरी प्रदेशका चारकिल्लाहरु परिमार्जन गरी पहिचान (स्वाभिमान) झल्कने गरी सामर्थ्यतासहितको प्रदेश
कोरोना संक्रमण- जोगिने आफै हो
संक्रमणको ग्राफ अलिक उकालो लाग्नेबित्तिकै सरकारले पुनः लकडाउनसक्छ। नेपालीले संयम राखेर आफ्ना दैनिक गतिविधि सञ्चालन गरे आफू जोगिने मात्रै होइन,